Book: Bangiyada Islaamka ah, Albaabka Maalgelinta Xalaasha Ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Book: Bangiyada Islaamka ah, Albaabka Maalgelinta Xalaasha Ah
Book: Bangiyada Islaamka ah, Albaabka Maalgelinta Xalaasha Ah
â€œIslamic banking and finance is no longer just a theory or a dream, in fact it is now an emerging, evolving realityâ€ Prof. Khurshid Axmed
Meesha, 40 sano ka hor, bangiyada Islaamku ahaayeen riyo, sida Prof. Khurshid cabbiray, bangiyada Islaamku maanta waxay ka mid yihiin nidaamyada maaliyadeed ee ugu koboca fiican, ugu faaâ€™iidada badan, looguna hadal-hayn iyo kalsooni badan yahay nidaamyada maaliyadeed ee adduunka. Dhinaca koboca iyo faaâ€™iidada, bangiyadaasi waxay 20-kii sano ee la soo dhaafay, sannad walba, sameynayeen koboc iyo faaâ€™iido sare u dhaafaysa 20%; dhinaca hadal hayntana, doodaha la xiriira bangiyada Islaamku waxay buuxiyeen shaashadaha TV-yada, boggaga internet-yada iyo jaraaâ€™idka caalamka. Waxa intaas dheer, in nidaamka maaliyadeed ee Islaamka maanta lagu derso, lagana dhigo xarumaha cilmiga ee ugu magaca iyo maamuuska dheer caalamka. Hadal-haynta iyo kalsoonida dheeriga ahi, qayb ahaan, waxay salka ku haysaa koboca hantida ay maammulaan iyo faaâ€™iidada ay sameeyaan; qayb ahaan, aaladaha ay isticmaalaan, qayb ahaanna siday ugu babac dhigeen iyo siday uga soo doogeen jaahwareerkii dhaqaale ee ku dhuftay heyâ€™adaha maaliyadda caalamka sannadihii 2007-2009.
Maxay ka yiraahdeen dadkii Akhriyey Buuga : Bangiyada Islaamka ee uu qorey Siciid Cali Shire [ Halkan Riix]
Qaybta afraad, heyâ€™adaha hantida u maammula sida waafaqsan shareecada Islaamku, waxay ka kooban tahay saddex cutub. Cutubka 11aad wuxuu muuqaal ka bixinayaa noocyada iyo aaladaha ay adeegsadaan heyâ€™adaha hantida u maammula sida waafaqsan shareecada Islaamka. Cutubka 12aad iyo 13aad waxay kormar ku samaynayaan labo ka mid ah adeegyadii ugu dambeeyey ee ku soo biira caalamka maaliyadda Islaamka, i.e. sukuk-ga iyo takaaful-ka.
Buuggaani, sida labadii buug ee ka horreeyey, â€œFuraha Ganacsiga iyo Hoggaamiyeâ€, waa buug u qoran qaab cilmiyaysan oo akadeemig ah (academic), sidaas aawadeed, buuggaan waxaa loo isticmaali karaa koorsooyinka Bangiyada Islaamka ee jaamicadaha iyo macaahidda sare ee dalka. Sidoo kale, buuggu wuxuu marjac iyo wehel u noqon karaa dadka ka shaqeeya, daneeya, dhiga, dhigta ama ku hawlan siday u fahmi lahaayeen guud ahaan nidaamka maaliyadeed ee Islaamka, gaar ahaan bangiyada Islaamka.